हे आमा ! - Himalkhabar.com
रिपोर्टमंगलबार, कार्तिक ७, २०६९
हे आमा !
मानव जातिका लागि धर्तीले जति बोझ् थामेकी हुन्छिन्, सन्तान र परिवारका लागि आमाले त्यतिकै कष्ट उठाउँछिन् भन्ने मान्यता छ।
आमाको माया : बर्दियाकी गीतादेवी घर्ती मगर (क्षेत्री) जन्मँदै कम तौल (डेढ किलो) को छोरा अंकितलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सल्लाह अनुसार छातीमा टाँसेर राख्ने विधि ' मायाको अँगालोमा' लिंदै। यसरी दैनिक शिशुलाई छातीमा टाँसेर आमाको न्यानो दिंदा बच्चाको हुर्काइमा सुधार आएको उनले बताइन्। तस्विर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
हत्याको अभियोगमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा मृत्युदण्ड सुनाइएका पर्वतका दुर्गाबहादुर सुनारलाई बचाउन आमा मनकुमारी (६४) ले गरेको हारगुहार सन्तानको जीवनरक्षाका लागि आमाले गर्न सक्ने प्रयासको बेजोड उदाहरण बनेको छ। नौ वर्षअघि काम गर्न यूएई गएको एक्लो छोरालाई २७ भदौ २०६९ मा दिन लागिएको मृत्युदण्ड टार्न उनले संसार गुहारेर मृतकका परिवारलाई रु.१० लाख ‘ब्लडमनी’ उपलब्ध गराइन्, जबकि उनको आर्थिक अवस्था रु.१० हजार जुटाउने पनि थिएन। छोरो बचाउन नसके आफू पनि नबाँच्ने उनको पुकारले यत्रो रकम जुटायो।
पहिले र अहिलेः १८९० सालमा खिचिएको (दायाँ तस्वीर) नेपालको पहाडी क्षेत्रकी एक आमा कोक्रामा बच्चा बोक्दै र फागुन २०६७ मा सुदूर पश्चिमको डडेल्धुराबाट डोटी जाने सडकमा छोरो बोकेर हिंड्दै महिला।
करबलमा परेका कतिपय आमा बच्चा फालेर हिंड्छन्, तर त्यस्ता शिशुलाई उठाएर वात्सल्य दिने अर्की आमा पनि प्रकट हुन्छन्। बिचल्लीमा परेका बालबालिका र कृतघ्न सन्तानको हेलाँहोचोमा परेका वृद्धवृद्धालाई आमाले झै स्याहारसुसार गर्ने दिलशोभा श्रेष्ठ, पुष्पा बस्नेत, ललिता धौभडेल आदि कर्मआमाहरू पनि यहीं छन् (हे. छुट्टै रिपोर्ट http://nepalihimal.com/article/aawaran/सीमाहीन-मातृत्व,299 )। जन्म दिने र कर्म दिने दुवैलाई आमाको स्थान दिने नेपाली संस्कार पनि हो।
अर्कोतिर, समाजको विधिविधान विपरीत विना बिहे आमा बनेर सगर्व सन्तान हुर्काउने कुमारी आमादेखि टेष्ट ट्युब विधिबाट बच्चा जन्माएर ममता–वात्सल्यको तृष्णा मेट्ने आमाहरू पनि छन्। पैसा लिएर अरूको शिशु जन्माइदिने अप्राकृतिक आमा (सरोगेट मदर) को अभ्यास पनि नेपालमा भित्रिसकेको छ, जसअनुसार नौ महीना ‘सरोगेट मदर’ को गर्भमा हुर्कने शिशु जन्मेपछि उसका लागि पैसा तिर्ने आमाको काखमा हुर्कन्छ। विदेशतिर त समलिंगी महिला (लेस्वियन) र पुरुष (गे) ले पनि बच्चा ‘एडप्ट’ गरेर आमा वा बाबुको चाहना पूरा गर्ने कानूनी अधिकार पाएका छन्। परिवारका भाउजू, फुपू र बुबाहरूले आमाको भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली समाज पनि बदलिंदो जीवनशैलीका कारण त्यस्तो अभ्यासबाट टाढा नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सबै धर्मले आमालाई शान्ति, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, दान र दयाको स्रोत मानेका छन्। आमाको पैतालामुनि स्वर्ग हुन्छ भन्ने विश्वास गरिने इस्लाम धर्ममा आमाबाबुका सामु उँचो स्वर गर्न पाइन्न। काठमाडौं, घण्टाघरको कश्मिरी तकिया मस्जिदका इमाम मौलना अली मञ्जरका अनुसार, पवित्र कुरानमा ‘आमाबुबाको सामु त्यसरी उभिनु जसरी मालिकको अगाडि सेवक उभिन्छ’ भनिएको छ। अर्को इस्लाम धार्मिक ग्रन्थ हदिशमा गुरु महम्मद सल्लाहु अलैहो होसल्लमले ‘आमाको पैतालामुनि स्वर्ग छ’ भनेको बताउँदै मौलना मञ्जर भन्छन्, “अल्लाह त्यो बेला मात्रै खुशी हुन्छन्, जतिबेला हामी आमाबुबालाई खुशी पार्छौं।”
गुरु महम्मद सल्लाहुसँगै जोडिएको अर्को प्रसङ्गमा सबभन्दा बढी कसको सेवा गर्ने भन्ने प्रश्नमा लगातार तीन पटक ‘आमाको’ भन्ने उत्तर दिएका सल्लाहु चौथो प्रश्नको उत्तरमा भन्छन्, ‘आमापछि बुबाको’। नेपाल मुश्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार आफ्नो समुदायमा घर बाहिर जाँदा अम्मीलाई सोधेर जाने अनि फर्कंदा सबभन्दा पहिले उनैलाई सलाम गरेर हात चुम्ने परम्परा रहेको बताउँछन्।
आमा हुँदाको छटपटीः कालिका–८ बर्दियाकी देवी परियार (२५) लाई गर्भ रहेको १० महीना लागेपछि १३ जेठ २०६७ मा व्यथाले च्याप्यो। श्रीमान् प्रकाश वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले घरमा १३ वर्षका छोरा अनि सात र तीन वर्षका छोरीहरु मात्रै थिए। उनी घरबाट करीब २० मिनेट हिंडेर राजमार्ग पुगिन् र लोकल बसमा नेपालगञ्जतिर लागिन्। त्यस्तो अवस्थामा उनलाई एक्लै एक घण्टा बस चढेर आइपुगेकी देखेर भेरी अञ्चल अस्पतालका डाक्टर–नर्सहरु छक्क परे। अस्पताल भर्ना भएको केही घण्टामै देवीले अढाई र डेढ केजीका जुम्ल्याहा छोरा जन्माइन्। त्यसपछि मात्र देवीकी आमा नानीमैयाँ अस्पताल आइपुगिन्। सुत्केरी भएको तेस्रो साता यो तस्वीर खिच्दासम्म देवी तरोताजा भइसकेकी थिइन्। तस्विर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
यसैगरी, हिन्दू धर्म भन्छ― ‘आमा जस्तो अरू कुनै तीर्थ छैन, उनको पूजा गर्नेको इहलोक र परलोक सुध्रन्छ।’ हिन्दूहरूको नीतिशास्त्रले ‘१० उपाध्याय बराबर एक आचार्य, १०० आचार्य बराबर एक पिता र १००० पिता बराबर एक माता’ भनेको छ। जगतगुरु शंकराचार्यले ‘कुपुत्र हुनसक्छ, तर कुमाता कदापि हुन सक्दिनन्’ भनेका छन्। हिन्दू र बुद्ध धर्म दुवै मान्ने मिश्रित नेवार समुदायमा प्रचलित आमाको मुख हेर्ने चाड त्यसै नेपालभर लोकप्रिय भएको हैन। हिन्दू धर्ममा मातातीर्थ, मातृऔंसी जस्ता मातृ दिवसहरू नै छन्। मातृ दिवस मनाउने परम्परा संसारका प्रायः सबै देशमा छ।
हरेक महिलामा मातृत्व (मदरहूड) को चाहना हुन्छ र सन्तान जन्माउने क्रममा आमाले आफ्नो ज्यान दाउमा राख्छिन्। एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा अझै पनि प्रसूतिको क्रममा एक लाखमा २८१ आमाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। १० वर्षअघि यो संख्या ५३९ थियो। प्रसूतिको बेला शिशुको मृत्यु हुँदा सर्वाधिक पीडा पनि आमालाई नै हुन्छ। अहिले एक लाख आमामध्ये ५५ जनाले प्रसूतिको क्रममा शिशु गुमाइरहेका छन्। जति कष्ट र संघर्ष गर्नु परे पनि बाँचेका सन्तानलाई बेहिसाब हार्दिकताका साथ हुर्काउने मुख्य भूमिका पनि आमाकै हुन्छ। २०५२–६२ को माओवादी हिंसात्मक विद्रोहले हजारौं सन्तानको ज्यान लिएर नेपाली आमाहरूमाथि अकल्पनीय पीडा थोपरेको छ (हे. छुट्टै रिपोर्ट http://nepalihimal.com/article/aawaran/भरजन्म-घायल%20,300)।
बच्चा जन्माउनेदेखि हुर्काउने–बढाउनेमा मुख्य भूमिका आमाकै हुने भएकाले सन्तानको आत्मीयता बाबुसँग भन्दा बढी आमासँगै हुन्छ। सन्तानप्रति आमाको आत्मिक सम्बन्ध गर्भकालदेखि नै विकास भएको हुन्छ। आमाको यही लगाव सन्तानको शिक्षा र संस्कारको पनि जग बन्छ। कतै ठेस लाग्दा मुखबाट अनायासमा ‘आमा’ नै आउँछ। “महान सन्त होस् या खुँखार बदमाश, सन्तान आमाको सामु नतमस्तक हुन्छ”, समाजशास्त्री डा. डिल्लीराम दाहाल भन्छन्, “आमालाई उपेक्षा गर्ने वर्ग–समुदाय र साहित्य संसारमा कहीं पाईंदैन।”
छोरा होस् या छोरी, अहिलेका आमाहरू शिक्षामा जोड दिन्छन्। दुई छाक खुवाउन सकेपछिको प्राथमिकता हुन्छ― शिक्षा। निरक्षर आमाहरू समेत जति दुःख गर्नु परे पनि छोराछोरीलाई पढाउन चाहन्छन्। – डा. चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री
आमाले सन्तानको सुखमा आफ्नो खुशी देख्छन्। सन्तानप्रति आमाको यस्तो दृष्टिलाई बुढेसकालमा उनीहरूबाट सुरक्षित भइने स्वार्थसँग पनि जोड्ने गरिन्छ। तर, ‘आमा’ टेलिसिरियलमा ८० वर्षकी आमाको जीवन्त अभिनय गरेका कलाकार हरिवंश आचार्य सन्तानका लागि आमाको माया माथिल्लो गह्राबाट तल्लोमा बगेको पानी जस्तै हो भन्छन्। आचार्यका अनुसार, छोराछोरीले आमाबाबुलाई भन्दा बढी माया आफ्ना छोराछोरीलाई गर्छन्, तिनका छोराछोरीले पनि तिनलाई भन्दा आफ्नै छोराछोरीलाई बढी माया गर्छन्। “त्यसकारण, आमाबाबुलाई साँच्चिकै माया गर्नु भनेको तल्लो गह्राको पानी माथिल्लो गह्रामा फर्काउनु जस्तै हो”, आचार्य भन्छन्, “तल–तल छोराछोरीतिर बग्ने मायालाई माथि आमाबाबुतिर फर्काउन छोराछोरीले हृदयमा अलिकति पम्प चलाउनुपर्छ।”
नेपाली साहित्यमा आमा देश (धरा) को प्रतीक हुन्। समालोचक डा. गोविन्दराज भट्टराई आमा र मातृभूमिबारे नलेख्ने नेपाली कवि–साहित्यकार पाउन गाह्रै हुने बताउँछन्। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको ‘नेपाल आमा कहीं छ घाम, कहीं छ छायाँ रे …’ होस् या गोपालप्रसाद रिमालको ‘आमा, त्यो आउँछ? हो बा त्यो आउँछ …’; यस्ता पंक्तिहरू धेरै नेपालीको मस्तिष्कमा ढुंगाको अक्षर बनेका छन्। ईश्वर बल्लभले ‘मेरी आमाले आत्महत्या गरेको देश’ भन्ने कविता लेखेका छन्। मदनमणि दीक्षितका रचनामा ‘धर्ती आमा हुन् र हामी छोराछोरी’ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिएको पाइन्छ।
दार्जीलिङबाट आएका धरणीधर कोइरालाले शुरूमा ‘नेपाल तिम्रो मोहडा हँसिलो, देखेर मर्छु कि म यसै मर्छु …’ भनेर लेखेका थिए। पछि नेपालको विकास हुँदै गएको देखेपछि ‘हे आमा तिम्रो मुहार हँसिलो हुँदैछ अब म ढुक्कले मर्छु’ भन्ने आशयको अर्को कविता लेखे। दार्जीलिङकै कवि वीरेन्द्र सुब्बाले ‘नेपाल आमा’ कवितामा ‘हे आमा! म मेघ हुँदो हुँ त तिम्रो काखमा सारा आँशु बिसाउने थिएँ …’ भनेर लेखेका थिए।
कवि मञ्जुलले आमाबारे श्रृंखलाबद्ध कविता लेखे। मोमिला, नवराज सुब्बा, रक्ष राई, विमला तुम्खेवा आदिसँगै उदीयमान उमेश अकिञ्चन, सजनकुमार लगायत धेरैले ‘आमा’ लाई सम्बोधन गरेर वा प्रतीक बनाएर शक्तिशाली कविता रचिरहेका समालोचक डा. भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रवासका नेपाली कविहरूले त आमाबारे झ्न् धेरै कलम चलाएका छन्। ‘आमा र गाउँ’ कविताका सर्जक श्रवण मुकारुङ नेपाली आमाहरूलाई त्याग र संघर्षको प्रतीक मान्छन्, जो अभद्र पुरुष वर्चस्व र अभावका बीच आफ्ना वैयक्तिक आकांक्षा–अवसरहरूलाई बेवास्ता गर्दै छोराछोरीलाई सबल बनाउँछन् र अन्ततः कन्दरा जस्तै सुनसान बन्न पुग्छन्।
मुकारुङले भनेको आमाको तस्बीर सङ्गीतकार आलोकश्रीकी आमासँग ठ्याक्क मिल्छ, जो बहुसंख्यक नेपाली आमाका एक प्रतिनिधि हुन्। “गोरखाको आँपपीपल, बोहोरा गाउँमा आठ वर्षको हुँदा मेरो मुनि चार भाइ–बहिनी थिए”, नेपाली संगीत उद्योगमा सफलताको कथा बनेका आमा भन्दै रुन पाऊँ… गीतका संगीतकार आलोकश्री आफ्नो बाल्यकाल र आमालाई सम्झ्न्छन्, “हरेक साँझ् हामी आमाको व्यग्र पर्खाइमा हुन्थ्यौं। उहाँले घर फर्कंदा मेलापातमा पाएको कोदोको रोटी र भुटेको मकै आफूले नखाई पोल्टामा लुकाएर ल्याइदिनुहुन्थ्यो।”
हे आमा नेपाल तिमीलाई, संसारकी राम्री बनाउँला …
आमा भन्दै रुन पाऊँ, बिराउँदा बाटो …
आमा रुँदै गाउँबेसी मेलैमा, छोरा रुँदै गोरखपुर रेलैमा …
डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ अहिले उनी १४ असोजमा १०० वर्ष लागेकी आमाको हेरचाहमा दिनरात तल्लीन छन्।
अमि्रकामा ‘नेपाली आमा’
धर्मछोरा ब्रोट कोबर्नसँग अमेरिकाको सडकमा विष्णुमाया।
२०४५ सालमा कोबर्नले नेपाली आमा लाई आफ्नो देश घुमाउन लैजाने निधो गरे। त्यसबेला उनको उमेर ८४ वर्ष पुगिसकेको थियो। तैपनि धर्मपुत्रको आग्रहलाई नाइँ भन्न सकिनन् र सात समुद्रपारिको ‘अमि्रका’ गइन्। रातो मखमलको चौबन्दी, कम्मरमा सेतो पटुकी, छिटको फरिया, मुगासहितको तिलहरी र टाउकामा मजेत्रो लगाएकी विष्णुमायालाई कतिले मदर टेरेसा भन्ठाने।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विशाल भूभागको एक छेउदेखि अर्को गर्दै विष्णुमायाले २५ वटा राज्य चहारिन्। डिस्नेल्याण्डको मिकी माउससित भलाकुसारी गरिन्, आदिवासी रेडइण्डियनहरूसित साक्षात्कार गरिन्। क्यालिफोर्नियाको ठूलो गोलाइका अजङ्गका रूखहरूको ‘रेडउड’ जङ्गल घुम्न गइन्। अमेरिकाको अन्नभण्डार मानिने मध्य–पश्चिम अमेरिकाका किसानहरूलाई ‘फार्म’ मै गएर भेटिन्। समुद्री जीवहरू राखिएको पार्कमा ओर्का–ह्वेलको खेल तमासा हेरिन्। जमिनमुनिबाट निश्चित समयमा एकाएक पानीको फोहोरा छुट्ने कोलोराडोको उदेकलाग्दो दृश्य देखेर दङ्ग परिन्।
आधुनिक सभ्यतादेखि टाढा आफ्नै गाउँमा वृद्धावस्था बिताइरहेकी नेपाली महिलालाई अमेरिकाको सयर गराएर कोबर्नले ठीक गरे वा बेठीक, अर्कै कुरा हो। तर अमेरिकामा खिचिएका विष्णुमायाका तस्बीरहरूले एउटी गाउँले नेपाली महिलाको अद्भुत यात्रालाई सधैं सम्झाइराख्ने छन्। अमेरिकाबाट फर्किएको केही वर्षपछि विष्णुमाया आफ्नै गाउँमा परलोक भइन्।
विष्णुमाया को अमेरिका यात्रा हिमाल, साउन–असोज २०५२ बाट सामान्य सम्पादनसहित